Diinummaa kaleeysaa irra isa diinummaa isa hardhaa kan Bilxiginnaatu caala. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDiinummaa kaleeysaa irra isa diinummaa isa hardhaa kan Bilxiginnaatu caala.
Coloneel Abiyyis ta’e Paartiinsaa Bilxiginnaan Warra Tplf/Tigraay kan ajjeesaafi hidhaa jiraniif yakka biyyaafi saboota irratti hojjetaniif osoontaane waldhabdee isaan jidduu naatu sirra caalaatiif akkataye jala muramee beekkamuu qaba. Kaleeysa warra kana waliin ojjetaaturan gaafuma 2018tii badhaasa warqee kennaniifaa xurataa baasaa turan” yoo yakkaa immoo hundisaaniituu warra harka dhiigaati.
Tplf Oromoo kijibduun gaaffii jala hingalu,garuu diinummaa kaleeysaa irra isa diinummaa hardhaa kan Bilxiginnaatu caala.
Namni Oromoo boochisee hundi, bilixiginaa har’a kana dabaalatee, tokko tokkon funaanamee firdii argachuuf jira! Inni ani mootii dha ofiin jedhuus dabaree isaa eegata.
“Yesterday is not ours to recover but tomorrow is ours to win or lose.” Lyndon B. Johnson
Har’a du’aaaf jireenya gidduu dhaabbatee saba waa’ee kaleessaa qofa yaadu ta’uun maaliif laata?
Amma Sibahaat Naggaa hidhamus hidhamuu baatus maal bu’aan isaa? Sibaahat Naggaa yoo kan hidhamuu qabu ta’e harka mirgaa Sibahaatii fi harka bitaa Abiyyii Ahimad walitti hidhanii waliin yoo hidhaman qofaa ta’a kan garaa na gahuu danda’u. Kanuma!
Summii Hailu Adunyaa facaasaa jiru kana yeroo gabaabaa keessatti ofii ija isaa haamaa.Gurbaattin akka saree waan itti dabataan liqimsitii jedhaan. Of eegii jedhaanii
Abbaan piroojektii Hayyoonni Keenya baay’een akka hidhamanii fi kaanis akka ajjeefamaniif diizaayina qopheesse #Isaayyaas_Afawarqii ta’uu beektuu??
Tigraay keessatti waraana geggeeffamaa jiruun gama mootummaarratti miidhaa guddaan gaheera. Waraanaa kaleessa galgala magaala Mehoonii fi Maqalee gedduutti taasifameen taankiwwaan 4, Baasii 3 loltoota Mootummaa 120 fe’ee deemu waliin guutumatti gubachuun beekameera.
Gama biraatiin FSM odeeffannoo qabatamaa maddeen waraanaa irraa argateen Sibaat Naggaa fi namoonni biroon booji’aman jedhaman Magaaluma Maqalee mana isaanii otoo jiruu torbee lama dura waraaanni mootummaa marsee qabe jedhameera. Qorannoon bal’aanis torbee lama guutuu irratti taasifamuun beekameera.
Yeroo ammaa mootummaan oduu kana akka haaraatti gadi baasuun kaayyoo biraa qaba jedhu. Kunis weerara Sudaan raawwataa jirtu dhoksuuf, gabaasa UN ummannii Tigraayi miliyoona 4.5 gargaarsa hatattamaa barabaada jedhee kaleessa baasee hirraanfachiisuu fi haleellaa kaleessa hidhattoonni Gumuz kaampii waraanaa Matakkal jiru irratti raawwatanii barbadeessan dhoksuufi jedhu taajjabdoonni.
Maaliis yaa tahuu garuu yakkamtoonni kaleessaa bifa kanaan salphachuun isaanii, yakkamtoonni har’a ummata keenya ajjeessaa jiran bor yakka jala akka hin baanes wabii tokkoo dha. Amalli badaan abbootii irree tokko walirraa barachuu dadhabuu isaaniiti
ODUU Hatattama TPLF xiyyara Ethiopia Rukute PPN oromia 40 Tika biyyattiin Hidhaman|Sudan|Moha oromo
EEYYE Rabbiin Akkuma hojjatan Namatti hojjata wanni Nama Ajaa’ibu isa dabrerraa inni jiru barachuu dhabuudha.